Igba Odibo N’oge Ugbua - Igbo News | News in Igbo Language
Sep 24, 2021 - 17:01 Updated: Sep 24, 2021 - 17:03
IGBA odibo bụ ihe dịbara gboo. O si n’aka nna nna anyị wee ruo anyị aka.
Odibo dị iche n’ohu. Odibo bụ mmadụ ịhapụ ụlọ ya gaa biri be mmadụ, nọdụ n’okpuru onye ahụ ma na-asọpụrụ onye ahụ. Nke a pụtara na ọ ga-eme ihe nile nna ya ukwu gwara ya mee ma ọ chọrọ ya ma ọchọghị. Iwu ji ya ịnọ n’okpuru nna ya ukwu. Ihe dị iche n’ebe odibo na ohu nọ bụ na odibo ga-emechaa nwere onwe ya, ma ohu na-anọgide n’okpuru nna ya ukwu.
E nwere ike gbuo ohu mgbe ọbụna.Odibo ọbụna chọrọ ibara onwe ya uru na-enwe nsọpụrụ na irube isi makana ndị Igbo kwuru okwu si na onye fee eze, eze e ruo ya.
Ana agba-odibo n’ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ na-ahapụ be nne na nna ha mgbe ha dị na nwata gaa biri be onye ọzọ na-ejere onye ahụ ozi. N’ọnọdụ dị otu a, ọ bụ oke na ọlụ ndị ahụ ilekọta nwata ahụ anya dịka ọ na-agbara ha odibo.
N’ụzọ dị otu a, ezinaụlọ a ga-ahụ na nwata ahụ (odibo) ga-anọ n’aka ha topụta ihe e ji mmadụ eme ma bụrụkwa mmadụ n’obodo. Ụfọdụ ndị mmadụ e sila n’ụzọ dị otu a too, soro na ndị ọnụ ruru n’okwu n’obodo n’ihi na ha gbara odibo nke ọma.
Ụzọ ọzọ e si agba odibo bụ mmadụ ịga binyere mmadụ mgbe o ruru ihe e ji mmadụ eme ka o wee nweta ihe ọ ga-eme iji wee kwụrụ n’onwe ya. Ima atụ, dimkpa na-aga be mmadụ biri, gbaa odibo ahịa. Nke a bụ iji mụta ahịa nna ya ukwu na-azụ ka o wee zụba ụdị ahịa ahụ. Na ụdị odibo dị otu a, a n-enwe afọ ole odibo na-anọ n’aka nna ya ukwu. Mgbe afọ ndị ahụ gachara, nna ya ukwu ga-edu ya ụlọ.
Odibo dị otu a ga na-agba mbọ nke ukwu n’ahịa ahụ ha na-azụ makana ọ bụ site na mbọ ya ka a ga-eji duo ya ụlọ. N’ọnọdụ dị otu a, mmadụ na-esite n’ịgba odibo buru nnukwu ọgaranya.
Ụzọ ọzọ esikwa agba odibo bụ mmadụ ibinyere mmadụ, nọdụ n’okpuru ya, na-asọpụrụ ya ma na emekwa ihe a gwara ya mee, ka o wee na-enweta ego. N’ụdị nke a, a na-akwụ odibo ụgwọ site n’ego. Nke a pụtara na ọ na-alụ ya dịka ọlụ oyibo.
N’ụdị odibo dị otu a, okenye nwere ike ịgbara nwata ọ tọrọ atọ odibo. Nwata nwanyị nwere ike mụọ nwa, kpọta okenye ka ọ na-ekuru ya nwa ma na ejere ya ozi. Okenye ahụ ga na-alụ ọlụ ya ma na-anara ụgwọ ya dịka ha si kpaa.
Ọdị ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ e si agba odibo mana nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-esite n’ịgba odibo nweta ezigbo ihe makana ọ bụ nwa ewu sepkuru ala, ọñụta nne ya ara.
Mana n’ime ihe nile, ihe ọbụna nwere uru nwere ọghọm. Ọghọm dị n’ịgba odibo bụ na mgbe ụfọdụ ka mmadụ na-ezute mmegbu na mkpagbu n’aka onye ọ na-agbara odibo, makana a sị na ọnụ ejiri bite akụ abụghị ya ka e ji akwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ anaghị emejupụta ihe ha na ibe ha kpara tupu amalite gbaba odibo.
N’oge ugbua, ọtụtụ ụmụaka na-agba odibo ka a na-ahụtakari ebe ha na-ebughari ahịa na-aga n’okporo ụzọ na n’ọdụ ahịa dị iche iche, mgbe ha kwesiri ịnọ n’ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ ka a na-akwu agụụ ebe ụfọdụ na-enweta mmeru ahụ dị iche iche.
Akụkọ kọrọ ka otu nwanyị siri were aka nwaodibo ya tinye na mmiri ọkụ, aka nwata ahụ wee gbagọọ. Nke a wee soro n’ọdachi a na-enwetazi n’ịgba odibo n’oge ugbua.
Ọtụtụ ndị na-agba odibo ahịa ka ọ na-abụ o ruo oge a ga-edu ha ụlọ, nna ha ukwu ebo ha ebubo nke ga-eme ka ọ gharazie idu ha ụlọ. Ọtụtụ odibo esila otu a gbara aka lọta be nne na nna ha ka ha gbachara odibo ọtụtụ afọ.
Odibo ụfọdụ ezutekwana ọnwụ ha site n’aka nna ha ukwu makana ọtụtụ ndị ọgaranya na-eji ndị odibo ha agwọ ọgwụ ego. Mgbe nke a mere, ha nwere ike sị na a na-achọ odibo ahụ achọ.
Ụfọdụ odibo a na-akwụ ụgwọ na-ahusikwa anya n’oge ugbua. Ụfọdụ ka a na-eri ego ha ma bochie ha ọnụ,ebe ụfọdụ na-ezutekwa ọnwụ ha n’ụzọ dị iche iche. Ihe mere odibo ahịa nwekwara ike ime odibo a na-akwụ ụgwọ. Nna ha ukwu ma ọ bụ nne ha ukwu nwekwara ike iji aka tigbuo ha.
Ka a na-ekwu maka ndị ọga ka a na-ekwukwa maka nsogbu si n’aka ndị odibo abịa. Ụfọdụ ndị odibo na-enyekwa nsogbu dị egwu. Ụfọdụ na-etinye nkewa n’ezinaụlọ ha batara. Ọtụtụ n’ime ndị odibo ekewaana dị na nwunye. Ọtụtụ ụmụnwanyị esitena n’ịgba odibo tụrụ ime n’aka nna ha ukwu ma si otu a chụpụ nwanyị nwe ụlọ.
Na nwa mgbe gara aga ka e jidere otu nwanyị ya na odibo ahịa dị ya maka na di ya jidere ha n’elu akwa ya. Nke a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya.
Odibo dịka ọ dị n’oge ugbua, kwesiri ka onye ọbụna hie asaa ‘anya lebara ya anya makana ajụghị ajụ eri na-ebute arịaghị arịa anwụ.